Tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka Lasibatra ny 60 %-n'ny ankizy ao Vakinankaratra
Anisan'ny faritra mahavokatra ny ao Vakinankaratra nefa ahitana ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo midangana indrindra, ho an'ireo ankizy ny dimy taona.
Ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka no tena mahazo vahana amin'izay. Raha araka ny fantatra mantsy dia tafakatra 60 % ny tahan'ireo ankizy voakasik'izany noho ny tsy fahaizan'ireo renim-pianakaviana misakafo mandritra ny fotoana hitondrany vohoka raha toraka izany ihany koa manomboka eo amin'ny fahenim-bolan'ilay zaza, fotoana hampidirana ny sakafo tsikelikely ka hatramin'ny faharoa taonany. Amin'ny ankapobeny mantsy dia saika lany amidin'ny isan-tokantrano avokoa ireo sakafo feno hery fiarovana sy be otrikaina ka izay sisa ambiny eo na zavatra hafa no hanin'izy ireo sy ireo menaky ny ainy. Manampy trotraka izany ny tsy fahaizana mitrandraka ireo vokatra vaovao hahatonga azy ireny ho sakafo mahavelona. Mba hahafahana mampihena io taha io, indrindra ho fanatsarana ny fahasalaman'ireo ankizy madinika dia hotanterahina any an-toerana ilay tetikasa FAFI hoenti-miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Vola mitentina 22 tapitrisa dolara no hampiasaina amin'izany. Faritra valo kosa no hahazo tombontsoa ka anisan'izany ity faritra iray ity. Tanjona ny hahafahana mampihena ny tahan'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka hatrany amin'ny 30 % latsaka ho an'ity faritra iray ity, raha araka ny fanazavan'ny ofisialy nasionaly misahana ny tsy fanjarian-tsakafo na ny ONN. Tsiahivina fa miteraka fahataran-tsaina eo amin'ny zaza ny tsy fanjarian-tsakafo. Mety hahakilemaina azy ireny ihany koa sady mampihisatra ny fitomboany. Nisy ny fampianarana sy fanentanana manokana ireo renim-pianakaviana tany amin'ny Faritry ny Vakinankaratra ny herinandro teo.